Vidio Lions Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga, Turkey Tail, Maitake, Shiitake No fillers 7 Mushroom Mixture Powder - Fandefasana maimaim-poana & Tsy misy hetra | WoopShop®
Liona Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga, Torkia Tail, Maitake, Shiitake Tsy misy mpameno 7 Vovon-tsakafo mifangaro holatra
$43.99 Regular vidiny $64.99
Color 100 h 200g 500g 1000g
100 h 200g 500g 1000g
Liona Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga, Torkia Tail, Maitake, Shiitake Tsy misy mpameno 7 Vovon-tsakafo mifangaro holatra - 100 g tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Ingredient: Lions Mane, Reishi, Cordyceps, Chaga Extract Powder
Laharana modely: G9867
Reishi: Nohajaina tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana ho "holatra tsy mety maty", Reishi dia iray amin'ireo holatra azo ampiasaina amin'ny sakafo manontolo noho ny tombontsoa ara-pahasalamana marobe. Reishi dia misy beta-glucans mahery sy voajanahary izay manohana ny fiasan'ny hery fiarovana. Heverin'ny maro ho adaptogen ambony, Reishi dia miara-miasa amin'ny vatanao mba hanampy amin'ny fitantanana ireo adin-tsaina ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po isan'andro ary hamerina ny fifandanjana amin'ny fomba voajanahary sy mahasalama. Misy fitambarana antsoina hoe triterpene izy io, izay manampy amin'ny fanohanana sy fandrindrana ny fihetseham-po.
Ity holatra sakafo feno sakafo ity dia azo alaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro ary amin'ny endrika safidy - ho toy ny vovo-dronono hanampiana amin'ny smoothie, shakes, kafe na dite mafana, ahetsiketsika amin'ny oatmeal, atody, akanjo, saosy, lasopy ary amin'ny fomba fanamboarana. , toy ny entana voaendy - na amin'ny endrika kapsily mety (vovoka na famenony).